Khilaafka biyo-xireenka Nile: Itoobiya iyo Masar kuleylka ay Sababeen Ee Awood la’aanta ah | Gaaroodi News
Khilaafka biyo-xireenka Nile: Itoobiya iyo Masar kuleylka ay Sababeen Ee Awood la’aanta ah
July 16, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Masar biyo-xireenka ay Itoobiya dhiseyso waxay u aragtaa inuu khatar ku yahay
Diblomaasiyad asluub ku saleysan ayaa dunida ka hirgashay balse wakiillada Masar iyo Itoobiya waxay muujiyeen jahwareer ay adag tahay in la qariyo.
Shirkii dhawaan dhacay ee golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay waxaa looga wada hadlay mashruuca weyn ee biyo-xireenka ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile. Kulankaasina wuxuu ku dhacay qaab muuqaal ah.
Kala fogaanshaha bulshada ee ay ka qayb galayaasha shirkaasi sameynayeen ayaa hoosta ka xariiqay inuu sidoo kale jiro kala fogaansho diblomaasiyadeed.
Haddaba arrintan ayaa waxay noqotay mid waxyeelleyneysa danaha qaran ee labada shacab iyo is aaminaadda ka dhaxeyn karta.
Biya xireenka weyn ee ay Itoobia ka dhiseyso wabiga Nile wuxuu awood u leeyahay xakameynta biyihi tagi lahaa dalka Masar oo uu ku dhammaado wabiga Nile.
Dhinaca kalena mashruuca marka uu si buuxda u howlgalo wuxuu noqon doonaa awoodda korontada laga dhaliyo ee ugu weyn gobolka, waxaana ka faa’iideysan doona 65 malyan oo Itoobiyaan ah oo aan hadda haysan adeeg koronto.
Dhismaha mashruuca biyo-xireenka oo billowday 2011-kii ayaa haatan ku dhow gabagabo.
Wakiillada Itoobiya iyo Masar ee ka qayb galay shirka qaramada midoobay, waxay labaduba ku doodayaan jiritaankooda inuu ku xiran yahay.
“Waxaa soo ifbaxaya khatarta uu biyo-xireenka ku keenayo noolasha 100 malyan oo Masaari ah oo ay noolashooda biyaha wabiga Nile ku xiran tahay,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Sameh Shoukry.
Sidaas si la mid ah danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Itoobiya Taye Atske-Selassie oo ereyo noocaasi ah adeegsaday wuxuu yiri: “Itoobiya iney biyaheeda isticmaasho ama ay adeegsato ma aha wax kala doorasho ah balse waa arrin dastuuri ah.”
Wadahadallo marar badan dhex marayey kooxaha farsamada ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudan ayaan arrimihii la iski hayey heshiis kama dambeys ah kasoo saarin.
Itoobiya waxay sheegtay inay toddobaadyada soo socda billaabeyso keydinta harada biyaha ku shubta biyo-xireenka, maadaamaa hadda lagu jiro xilli roobaad dalka Itoobiya. Egypt waxay sheegtay biyaha wabiga Nile inuu beeraheeda lafdhabar u yahay
“Dhinaca Itoobiya, dhismaha biyo-xireenka iyo buuxinta biyaha uma aha labo arrimood oo kala si kala duwan loo sameynayo,” ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha wadaxaajoodka u qaabilsan Itoobiya, Zerihun Abebe, oo BBC-da u warramay.
“Masaaridu waxay isku dayayaan inay beesha caalamka ka dhaadhiciyaan arrin taas ka duwan,” ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray mabaadiidii aasaasiga ee 2015-kii lagu heshiiyey ay Itoobiya u oggolaanayaan inay howlaheeda sii wadato.
Balse Masar sidaas wax uma aragto.
Mareykanka wuxuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo Masar iyo Itoobiya si ay heshiis kama dambeys ah u gaaraan.
Bayaan ay soo saartay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in wadahadallada biya xidheenka ku saabsan ee horay u soo socday ay ku saleysnaayeen in biya xidheenka Itoobiya ay dhisaneyso loo maareeyo si aan saameyn u geysaneyn waddamada kale ee uu wabiga sii maro ee Suudaan iyo Masar.
In sidoo kale Itoobiya looga baahan yahay inta arrinta wabiga heshiis kama dambeys ah laga gaarayo in aysan billaabin buuxinta biya xidheenka ay dhiseyso.
Buuxinta biyaha wuxuu Mareykanka shuruud uga dhigay heshiiska kama dambeysta ah oo ay dhammaan dhinacyada isla gaaraan.
Balse heshiiska ay labada dal wada galeen laguma xusin 9-ka dal ee uu wabiga Nile maro oo ay Itoobiya ka mid tahay.
Wabiga Blue Nile oo Itoobiya ka soo kicitima wuxuu magaalada Khartoum kaga darsamayaa wabiga White Nile, 80% biyaha wabigaasina waxay ka yimaaddaan dalka Itoobiya.
Itoobiyana waxay u aragtaa “caddaalad darro taariikhi ah” in lagu sameeyey oo la hor istaagay “kheyraadka dabiiciga ee ay xaqa u leedahay iney ka faa’ideysato”.
“Itoobiya haddii ay oggolaato xaddi biyo oo la ogyahay iney Masar sanad walbo hesho, taasina waxay ka dhigan tahay ansixinta sharcigii caddaalad darrada ahaa ee ay gumeystayaashu dajiyeen, taasina ma aha mid la qabli karo” ayuu yiri wakiilksa Itoobiya.
Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in sanadka labaad ee buuxinta biyo-xireenka ay sii deyneyso ugu yaraan 31 balyan oo Kiyubik Mitir oo cabbirka biyaha ah, balse wixi intaa ka dambeeya Itoobiya ma aysan sheegin biyaha ay sii deyn doonto.
Muuqaal biyo xireenka laga sameeyey
Join Alastair Leithead iyo kooxdiisa waxay 2018-kii booqdeen wabiga Blue Nile halka uu ka soo kaco ilaa iyo badda uu wabiga ku dhammaado, kaddib marka uu sii mara Itoobiya, Suudaan iyo Masar.
Biyo aad u badan haddi ay wabiga ka baxaan xilliyada abaarta oo Masar gaaraan taasi waxay keeni kartaa biyo xireenka weyn ee ay Itoobiya dhiseyso inuu shaqada joojiyo biyo yari soo food saareysa awge
Balse Masar waxay ka digtay iney tallaabbo qaaddo iyada oo aan ogeysiinin xaddiga biyaha rasmiga ee ay heleyso.
Qaramo ku midoobay biyo-xireenka
Sagaal sano oo wadahadal ah kaddib ayaa laga yaabaa inuu ka turjumayo xaqiiqada ah in tani ay tahay xeelad diblomaasiyadeed oo kala fogaanshihii jiray lagu soo afjari karo.
Balse madaxweynaha Masar C/fataax al-Sii iyo Ra’isal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxaa gudaha dalalkooda kaga furan arrimo siyaasadeed oo si aad ah u khuseeya arrinta la isku mari la’yahay ee wabiga.
Itoobiya dhankeeda dhismaha biyo-xireenka waxay ku bixisay $4 balyan oo doolar. Lacagtaasi ayey dowladda Itoobiya gudaha iyo dibadda ka uruurisay.
Mr Abiy sidaas oo kale arrinta biyo-xireenka waxay u tahay xaalad siyaasadeed oo ay jawaab waafi ah uga sugayaan taageerayaashiisa, ayna ku taageerayaan go’aan kasta oo uu qato.